nasiana mpiambina sy ny mivory 2110
Soso-kevitra ho an`ny mpamily
Disassembly. Esory ny locking vava vola aminy, avy amin`ny piston hato Pin, hisintona Pin sy elektrônika avy ny piston tehina. Esory ny piston peratra.
Mampifandray tehina horonan nanery an-mampifandray tehina. Noho izany, rehefa disassembling ny maotera sy ny mampifandray tsorakazo sy piston horonan no extruded hazo dia tsy navela.
Raha misy tsipiriany ny mampitohy tsorakazo sy ny piston no simba sy efa tonta kely, dia azo ampiasaina indray. Noho izany, nasiana mpiambina hanamarihana azy, mba hanohy ny hanangona ny vondrona mitovy antsipirihany sy namponeniny tany an-teo aloha varingarina maotera.
Ampio. Alohan`ny mivory ny rantsan mba haka ny pistons sy mampifandray hazo. Ao amin`ny kilasy vaovao antsipirihany ny fantaka lavaka ao amin`ny piston tsorakazo sy tsy maintsy mitovy ny kilasy ny rantsan-tànany. Ao amin`ny faritra ny hetsika teo aloha ny tokony pairing ny piston Pin, voaisy diloilo,
Izy dia tao amin`ny lavaky ny piston avy amin`ny tsotra gazety ny ankihibe Fig. 2-37 ka tsy hianjera avy ao aminy, raha mitandrina ny piston araka ny hita ao amin`ny kisary. 2-38.
Fig. 2-37. Ny piston Pin dia tsy maintsy apetraky maika ny ankihiben
Fig. 2-38. Nanamarina mendrika ny piston Pin
Ny rano indray mitete-midina rantsan hisolo ny hafa, ny sokajy manaraka. Raha ny piston Ampidirina ny rantsan-tanan `ny sokajy fahatelo, hanoloana ny piston fantaka sy ny fampifandraisana tehina.
mivory mampifandray tsorakazo sy piston no tanterahina any mba mivadika. Alohan`ny fiangonana, fikojakojana ny piston fantaka miaraka amin`ny menaka maotera. Piston vava vola aminy, napetraka tao amin`ny manaraka ny filaminana.
Ampiharo menaka maotera ny Groove eo amin`ny piston sy piston peratra. Toerana misy ny piston vava vola aminy, ka ny hidin-trano ny ambony famatrarana peratra napetraka nandritra ny zoro ny eo ho eo 45 ° ny amin`ny axis ny piston Pin, locking ny ambany famatrarana peratra - nandritra ny zoro ny eo ho eo 180 ° ho amin`ny axis ny hidin-trano ny ambony famatrarana peratra sy ny hidin-trano menaka scraper peratra - nandritra ny zoro ny eo ho eo 90 ° ny amin`ny axis manidy ny ambony peratra famatrarana.
Ny famatrarana ambany peratra hametraka recessed teo cm. Figure: 2-34. Raha ny peratra dia voamariky ambony na ny ambony, ny peratra mametraka ny marika-niakatra ho any amin`ny farany ambany ny piston.
Alohan`ny peratra fametrahana ny diloilo, ho azo antoka fa ny mpiray expander loharano any amin`ny lafiny tandrifin`ny peratra ny hidin-trano.
Manadio ny piston avy amin`ny varnish sy ny potipoti-javatra rehetra avy hanala ny lubricating fantsona piston sy ny fampifandraisana tehina.
tsara nandinika zavatra. Triatra ny misy natiora eo amin`ny pistons, piston peratra, fanondrony amin`ny rakotra fanaovam-panavotana mampifandray tsorakazo sy tsy mahazo. Raha ny miasa ambonin`ny-drindrina dia lalina ny loza, hanoloana amin`ny vaovao fisaka sy mivelatra.
ny hantsana eo amin`ny piston peratra sy ny grooves
Jereo ny andian-mandalin-javatra araka ny hita ao amin`ny kisary. 2-39, nampidirinay ny peratra ho any amin`ny mifanaraka Groove. Tombanana hantsana Namarana hatramin`ny 0.01 mm ny ho faritra vaovao no ho ny ambony famatrarana peratra dia 0.04-0.07 mm ny ho ambany - 0.03-0.06 mm ny sy ny menaka scraper - 0.02-0.05 mm. Indrindra azo atao tanteraka anaovan`ireo fangatahany fahazoan-dalana - 0,15 mm.
ny valifaty ao ny hidin-trano ny piston vava vola aminy, Jereo ny andian-mandalin-javatra izy amin`ny alalan`ny nampidirinay ny peratra famantarana ahafahana manaraka Fig. 2-40, lavaka manana ny savaivony mitovy amin`ny anarana savaivony ny peratra amin`ny fandeferana ny 0,003 mm. Ny vava vola aminy, ny haben`ny ara-dalàna ny 82 mm ny savaivony azo ampiasaina hamafin`ny 67.8125.9502.
Ny elanelana dia tokony ho any amin`ny isan-karazany ho an`ny rehetra 0.25-0.45 mm ny peratra vaovao. Indrindra azo atao valifaty rehefa tonta - 1 mm.
Fig. 2-39. Jereo ny fangatahany fahazoan-dalana eo amin`ny piston peratra sy ny grooves
Fig. 2 -40. Hamarino ny fangatahany fahazoan-dalana ao ny hidin-trano ny Rings
Manitsy clutch 2110
Ny rafitra novakiny ny iray indray mandeha tokony ho 2110
Rear varavarankely madio kokoa 2110
ronana na baotin`i sarony, bumpers 2110